အိန္ဒြာ: သုခရိပ်မြုံနှင့် သူခရိပ်မြုံမှသည် အလှူပွဲမှတ်တမ်း
သုခရိပ်မြုံနှင့် သူခရိပ်မြုံမှသည် အလှူပွဲမှတ်တမ်း
(၁)။ ဒီလိုလေးတွေ စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။
၂.၂.၂၀၁၁ နေ့ က အမိမြန်မာပြည်သို့ တစ်ခေါက်ပြန်ခွင့်ရခဲ့သည်။
MAI ။ ထွက်ခွာချိန်က ၁နာရီနဲ့ မိနစ် ၂၀ တိတိ နောက်ကျ၊ အချိန်တွေက လိုတာထက်ပိုပြီး ကြာမြင့်လွန်း လိုက်တာလေ..။
ဒီဇင်ဘာကနေစလို့ ရှုပ်လိုက်ရတဲ့ အလှူခံကိစ္စတွေ ရုံးကိစ္စတွေ္စ ။ အလှူခံခြင်းကိစ္စကတော့ အစစအရာရာ စိတ်ချမ်းသာစရာပြီးပြတ်ခဲ့ပြီ..။
အတင်း မပြတ်ပြတ်အောင် မပြတ်လည်းပြတ်သယောင်ဖြတ်ထားခဲ့ရတဲ့ရုံးအလုပ်တွေအကြောင်းကိုတော့ နည်းနည်းလေးမှ ယောင်ရမ်း တောင်တွေးတော မနေတော့ပါ။
ရိုးရာမပျက် လုပ်ဆောင်ရမည်များကို အသင့်ပြင်ဆင်ထားလိုက်သည်။
လူတန်းကရှည်လွန်းလေသည်လား စစ်ဆေးကြသည်က တိကျစိတ်ရှည်လွန်းသည်လားမသိ ဖြစ်နိုင်လျှင် လူတန်း ကို ခုန်ပျံပြီး ထွက်သွား ချင်လိုက်တာ..
ဖြစ်နိုင်လျှင်ပေါ့လေ...။ ဖြစ်နိုင်လျှင်...ဖြစ်နိုင်လျှင်....ဒီလိုပဲ ဖြစ်နိုင်လျှင်တွေက များလွန်းလှသည် မဟုတ်ပါလား။
ရောက်ရောက်ချင်း ဂျပန်က ခင်လေးငယ်လွှဲလိုက်တဲ့ ငွေလွှဲနဲ့ ချိန်း ၊ သင်းသင်းမ ပေးထားခဲ့တဲ့ ငွေတွေ ကို ဗမာ ငွေလဲ။ နောက်တော့ အိန္ဒိယကငွေ ၊ ကိုရီးယားက ပို့တဲ့ငွေ...
ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ ငွေတွေလိုက်စုပြီးတော့ အလှူခံပွဲလေးအတွက် မမ မနော်ဟရီနဲ့ အသေးစိတ်တိုင်ပင်ကြ၊ ခေါင်း စားကြ ၊ ဖုန်းတွေ မရပ်မနားခေါ်ကြ ၊
သုခရိပ်မြုံပဲသွားလှူရင်ကောင်းမလား ၊ လှူမှာက ၄ နေရာတောင်ဆိုတော့ သုခရိပ်မြုံမှာဆို သွားရလာရတာ ခက်သွားမယ်နော်..။
ကားတစ်စီးနဲ့ တစ်နေရာစီ လိုက်လှူကြရင်ရော...၊ ကားခက ပွဲလုပ်တာမက ကုန်လိမ့်မယ်..။ ဂျာနယ်လစ် တွေ လည်း လိုက်နိုင်ကြမယ် မထင်ဘူး.။
ဝေဘာဂီဆေးရုံလည်းပါတော့ မြို့ထဲလုပ်တာက ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်..။City star Hotel မှာပဲ လုပ်ကြရင် ကောင်းမလား ၊ ဦးမျိုးက သူဖုန်းဆက်ပေးမယ်တဲ့..။
ပွဲတွေဆက်နေလို့ ၁၅ ရက် နေ့မှာတောင် အချိန်က၄ နာရီမှရတယ် အိန္ဒြာရေ ၊ ၁၆ ရက်နေ့ပြန်မှာဆိုတော့ အဆင်ပြေပါ့မလား..။ ဖြစ်တယ် မမ ရအောင်လုပ်မယ်..။
ညီမလေး သုခရိပ်မြုံကို သွားနေပြီ။ ဝေဘာဂီကိုလည်း ကိုလှိုင်ဦးကသွားဖိတ်ပေးမယ်တဲ့..။
ဖိတ်စာလေးကိုပဲ ပွဲမှာ ကပ်ဖို့ ဗီနိုင်းထုတ်လိုက်တယ်.။
ရပြီ ဆရာအော်ပီကျယ်ရော ဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင်ရော နယ်စာပေဟောပြောပွဲကနေ ပြန်ရောက် နေကြပြီတဲ့
နောက်တော့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် အိုင်ဒီယာ မဂ္ဂဇင်းတိုက်ပေါ်မှာ ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး ဖိတ်စာ ကိုယ်တိုင်လုပ် ဓါတ်ပုံဆိုင်မှာ ပရင့်ထုတ် စာအိပ်လေးတွေ ထဲမှာထည့်
အဲဒီလို ရှုပ်ခဲ့ရသမျှ အိန္ဒြာ့နောက်မှာ ပါရမီဖြည့်ဘက်ကြီးကတော့ တစ်ကောက်ကောက် ပါရမီဖြည့်မဆုံးနိုင် လောက်အောင်..
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဒီအလှူပွဲလေးက အောင်မြင်ချောမောစွာ ကြည်နူးပိတိဖြစ်စရာ စတင်ခဲ့ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်ပေါ့.။
(၂)။ သုခရိပ်မြုံလေးရဲ့ လက်ရှိခြေအနေ...
အမှတ် ( ၉၇၉-၉၈၂)၊ တပင်ရွှေထီးလမ်း၊
ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မြို့။
သုခရိပ်မြုံတဲ့ မိဘမဲ့ HIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ ကလေးလေး ၆၄ ယောက် ရှင်သန်နေထိုင်ရာလေး
မောင်နှံစုံ သုခရိပ်မြုံကို သွားကြတော့ ကိုယ်မြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့သလို အဆောက်အဦးလေးတစ်လုံးထဲ မဟုတ်တော့ပဲ အဆောက်အဦး ၃ လုံးနဲ့ သုခရိပ်မြုံက ခန့်ငြားအေးချမ်းလို့
အစ်မစုထားနဲ့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်တွေ့ရတော့ ၀မ်းသာရ၏။ အစ်မကြီးသန်းမြင့်အောင်နဲ့ ဖုန်းရပြီး ညီမရေ စုထားနဲ့မကြီး အလှဆုံးပြင်ဆင်လာခဲ့မည်ဆိုတော့ ရယ်ရယ် မောမော..
အခု ကလေးတွေက ၆၄ ယောက်အထိ ဖြစ်လာပြီး အရွယ်ရောက်တဲ့ ကလေးတွေလည်း ရှိလာပြီမို့ နောက်ဘက်ကမြေကွက်ကိုပါ ဆက်ဝယ်ပြီး အဆောင်လေးတွေ ဆောက်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတာလို့အစ်မစုထား က ပြောပြခဲ့သည်။
ကားလေးတစ်စီးလည်းဝယ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ကလေးတွေ အလှည့်ကျ ဆေးခန်းပြရင်ဖြစ်စေ ကျောင်းကြိုကျောင်းပို့အတွက်ဖြစ်စေ တစ်ခါတစ်လေ ဆေးရုံတင်ရတာမျိုးလည်းတွေ အတွက်တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ် လို့လည်း ပြောပြခဲ့သေး၏။
အခုဆို အငယ်ဆုံးက ၁နှစ်ခွဲသားလေး တော်တော်လေး သေးညှက်ပြီး ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ တွေ့ခဲ့ရသည်.။
အကြီးဆုံးကတော့ ၁၄ နှစ် ကြီးကောင်ဝင်စအရွယ်လေးရှိနေလေပြီပေါ့.။
ဒါကတော့ သုခရိပ်မြုံက ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဘုရားခန်းလေးပါ..
ဒီစာလေးတွေကတော့ ဧည့်ခန်းမှာ ကပ်ထားခဲ့တဲ့ စာလေးတွေ...
ဒီ အရုပ်ကလေးတွေက ကရုဏာ မေတ္တာ ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရုပ်ကလေးတွေ ၊
၃နှစ်နီးပါးဖြူဖြူ၀၀ ချာတိတ်မလေးက ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တော့
ရဲနိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ မည်းမည်းလုံးလုံးလေးက ဖလိုင်းကစ်တွေပေးတော့ တာ့တာတွေ စွတ်လုပ်တော့ ၊ မင်္ဂလာပါလို့ သံပြိုင် ရေရွတ်လိုက်သံကိုကြားရတော့ ၀ဲတက်လာတဲ့ မျက်ရည်တို့က ထိမ်းသိမ်းလို့ မရနိုင်ချင်တော့
အစ်မ ရေခဲမုန့်ကျွေးလို့ရမလားဟင်..၊ ရတယ် ညီမ ၊ အိန္ဒြာ့ အမျိုးသားက မြောက်ဒဂုံထဲ ရေခဲမုန့်ရောင်းတဲ့ ဆိုင် ပတ်ရှာပြီး ၀ယ်တော့သည်။
ရေခဲမုန့်စားနေတဲ့ ကလေးလေးတွေကို မျက်နှာဖက်က ဓါတ်ပုံရိုက်မရလို့ ကျောဘက်ကလေးကတော့ အမှတ်တရ ရိုက်ယူမိခဲ့သည်..။
တစ်ချို့ကလေးလေးတွေက ကျောင်းသွားတက်နေကြတော့ လူတော့မစုံပါဘူးတဲ့
(ကလေးတွေ ရေခဲမုန့်စားတာကို ဦးဦးဝင်းဇော်လှိုင်က သဘောတွေ ကျလို့ပေါ့)
ရဲနိုင်ဝင်းလေးကတော့ ပူလို့ဆို မှုတ်ပြီးစားနေလေရဲ့
ကရုဏာ မေတ္တာရှင် ဆရာမလေးတွေ
ဆရာမတွေရဲ့ တကယ့်သွေးသားအရင်းလို ထားရှိနိုင်ကြတဲ့ မေတ္တာတရားတွေကို အံ့သြချီးကျူးရင်း အားကျ နေခဲ့မိရသည်။
ဒီနေ့ကျွေးတာ ကြက်သားဟင်း၊ မျှစ်ကြော်နဲ့ ချည်ရည်ဟင်း စားတာနှေးနေတဲ့ ကလေးလေးတွေကို အစ်မစုထားနဲ့ ဆရာမလေး နှစ်ယောက်က ကိုယ်တိုင် နယ်ဖတ်ပြီး ခွံ့ကျွေးပေးနေကြသည်။
နေ့စဉ်ကလေးလေးတွေ အတွက် စားမှုသောက်မှု အတွက် ဒီလိုမျိုးလေးတွေ လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။
နည်းနည်းလေးအရွယ်လောက်လာတဲ့ ကလေးလေးတွေက မောင်ငယ်ညီမငယ်လေးတွေကို ဖေးမလို့ ၊ ဆရာမတွေကို ကူညီလို့၊ ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့ တစ်နေရာ တစ်ဒေသစီက ဒုက္ခတစ်မျိုးစီနဲ့ လာရောက်ဆုံဆည်းကြ ရပေမယ့် ခုတော့ မေတ္တာတွေနှင့်ဆွေမျိုးတော်စပ်နေကြပေပြီ။
အစ်မစုထားက တစ်နေ့လုံးဈေးဖိုးချည်း ၅သောင်း လို့ သတ်မှတ်ထားပြီး လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ဟုဆိုသည်။
နေ့စဉ်လှူဒါန်းထားကြတဲ့ အလှူရှင်စာရင်းတွေ နောက်ဆရာစိုးသော်တာ သမီးလေးမွေးနေ့ လှူဒါန်းထားတာ တွေ့တော့ သာဓု အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်မိရင်း..
ပြန်လာကြတော့ ကြည်နူးတာလား ၀မ်းနည်းတာလား ဘယ်လိုမှန်းမသိသောခံစားချက်တွေနှင့် လှိုက်မော နေခဲ့ပါသည်။
ကိုယ် အစွမ်းရှိသမျှလေးလုပ်ပေးနိုင်သည်ကိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာ ကျေနပ်မိသလိုတော့ရှိမိလိုက်သည်။
ဒီလို လူမှုတာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိပြီး လူမှုတာဝန်တွေထဲမှာ နစ်မြုတ်နေကြသူများကို လူ့အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ အကျအပေါက် ကလေးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဖာပေးထေးပေးနေကြသူများကိုလေးလေးစားစား ဦးအခါခါ ညွှတ်လိုက်မိခဲ့ပါသည်။
(၃)။သုခရိပ်မြုံမှသည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ စာရေးသူစာဖတ်သူ အလှူရှင်များ၏ မွန်မြန်ဒါန အလှူပွဲလေး
ဒီလိုလေး ဖိတ်စာလေးလုပ်ပြီး ဗီနိုင်းလေးထုတ်ပြီး အလှူပွဲမှာ ကမ်းခဲ့ ကပ်ခဲ့ပါသည်..။
ဒီပွဲမှာ Idea မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာချုပ်ရာမောင်မျိုးက အခမ်းအနားမှုးလုပ်ပေးပြီး ဒီပွဲလေးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို အလှူဒါနပြုခဲ့သည်
ဆရာမောင်မျိုးက မနှစ်က အလှူခံရခဲ့တာတွေ ၊ အခု ဒုတိယအကြိမ်မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ အလှူငွေနဲ့ အလှူရင်တွေကို ပြောပြပေးပြီး အခုလို ပွဲလေးတွေ လုပ်ခဲ့တာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုခိုင်မှာ သဒ္ဒါတရား တွေ ပိုပေါက်ပြီးအလှူရှင် ၁၁၁ယောက်ကနေ ၁၃၁ ယောက်အထိ တိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ ထည့်သွင်းပြောကြား သွားခဲ့ပါသည်။
နောက်တော့ ဒီပွဲလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှုင်းလင်းပြောကြားပေးဖို့ အိန္ဒြာ့ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး
အိန္ဒြာ အဓိကပြောဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ဒါဟာအဖြူရောင်သက်တံ့ကနေရရှိခဲ့တဲ့ သန္ဓေတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒြာ မနော်ဟရီတို့က အလှူရှင် ၁၃၁ ယောက်ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးရတာဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့ ဒီဇင်ဘာ(၁)၇က်နေ့က စတင်ပြီး (၂)လတိတိအချိန်ပေးကောက်ခံခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၅ နိုင်ငံ အလှူ၇ှင် ၁၃၁ ဦးမှ အလှူငွေ ၄၁သိန်း ၉သောင်း ၃ထောင် တိတိ လက်ခံရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မမြင်ဖူးမတွေ့ဖူးပဲ မေတ္တာစေတနာတွေချင်း ကွန်ယက်တစ်ခုလို ချိတ်ဆက်ပေါင်းစည်းမိတဲ့ ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တိုင်းပြည် အရပ်ရပ်က အိန္ဒြာရေးတဲ့ စာရေးကဗျာလေးတွေကိုပဲ ဖတ်ပြီး ယုံယုံ ကြည်ကြည်လှူဒါန်းကြတာဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့တွေကို ရှုင်းရှုင်းလင်းလင်းထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်စေလိုသလို၊ ကိုယ့်အလှူဒါနလေးကို ကိုယ်ပြန်ပြီး ပိတိဖြစ်စေ လိုလို့ ဒီလိုပွဲလေးတွေကို အချိန်မရတဲ့ ကြားက စာနယ်ဇင်း ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှေ့မှာ တရားဝင် လှူဒါန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အလှူရှင်စာရင်းတွေကို အိန္ဒြာ့ Blog တွေ Facook Book တွေမှာ တင်ပေးထားကြောင်းကိုလည်း အသိပေးပြောကြားဖြစ်ခဲ့ပြီး အလှူ ပွဲကို အထမြောက်အောင်ပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ နောက်ထပ်လှူချင်အောင် သတင်း လေး တွေကို ရေးသား ဖေါ်ပြပေး ကြတဲ့ မမမနော်ဟရီနှင့်တကွ စာနယ်ဇင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း စသဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်.။
အင်တာဗျူးတွေမှာ ဒီနှစ်ဂျပန်နိုင်ငံကစင်ကာပူနိုင်ငံပြီးရင်ဒုတိယမြောက်အများဆုံးလှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပြီးဘလော့ဂ်ကာ ခင်လေးငယ်နဲ့ သူငယ်ချင်းသင်းသင်းထွဋ်တို့က အားတက်သရောစိတ်ပါလက်ပါ အလှူခံပေး ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း
နောက်မလေးရှားက ဘလော့ကာ ခရေတွန်နဲ့ မိုးမမလွင် ၊ ကိုရီးယားက စာပေမြတ်နိုးသူများ အိန္ဒိယကလည်း အရှင် က စလုံးမှာ အိန္ဒြာ ၊ မယ်ကိုး ရီနိုမန် နဲ့ မိုးကုတ်သား တို့က အလှူခံပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့၊တစ်နိုင်ငံချင်းစီ အလှူရှင်ဦးရေ ရရှိတဲ့ အလှူငွေတွေကို အသေးစိတ် စာရင်းပေးခဲ့ပြီး နောင်နှစ်တွေမှာလည်း ဒီလို လှူဒါန်းချင်ပါကြောင်း လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းကိုလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြောကြား ဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်တော့ ဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင်က ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပြီး မနှစ်က ခရီးလွန်နေလို့ မလာနိုင်တာကို တောင်း ပန်ပါကြောင်း ဒီနှစ် ၂ နှစ်စာ ကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အခု သန်လျင်မှာဆည်းဆာရိပ်အမည်ရှိ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘွားရိပ်သာကို ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခု လက်ရှိ အဘိုးအဖွား ၁၂ယောက်တိတိရှိ ကြောင်း၊ အခုလို လူမှုရေးတွေ လုပ်နိုင်တာဟာလှူဒါန်းသူတွေ ရှိလို့သာ လုပ်ကိုင် နိုင်တာဖြစ်ပါကြောင်း စသဖြင့် ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်..။
စာနယ်ဇင်းများကိုယ်စား မုဒိတာ စကားပြောကြားပေးတဲ့ ဆရာဦးဝင်းငြိမ်းကတော့ စာနယ်ဇင်းဆရာတွေ အနေနဲ့ တစ်ခြားလူမှုရေးတွေ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီ AIDS ဝေဒနာရှင်တွေ အတွက်တော့ မေ့လျှော့ နေခဲ့မိသလိုဖြစ်နေပါကြောင်း သူ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါကြောင်း သူဘုရားကျောင်း တက်တိုင်း တံတားတစ်ခုအောင်မှာ လူတစ်ယောက်ကို အပတ်စဉ်တွေ့တွေ့နေရကြောင်း အဲဒီ့လူဟာ တွေ့တဲ့သူတိုင်းကို သူ့ကို မြန်မြန်သေဖို့ဆုတောင်းပေးကြပါလို့ အမြဲပြောတတ်ကြောင်း
အဲဒီ့လူဟာ အိမ်က စွန့်ပစ်ထားတဲ့ AIDS ဝေဒနာရှင်တစ်ဥိးဖြစ်ကြောင်း သူ့အတွက် သေတာ ကပင် ပိုကောင်းသလိုဖြစ်နေကြောင်း ၊ ဒီလို မိသားစုကပင် စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေ အတွက် ဖေးမ စာနာ နားလည်းဖို့ လိုအပ်ကြောင်း နဲ့ဆရာမ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင် တို့လို လူမှုရေးလုပ်နေသူတွေ အတွက်ကျေးဇူး တင်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း စသဖြင့် အမှတ်တရ မုဒိတာစကားမြွက်ကြား ပေးသွားခဲ့ပါသည်။
ပထမဆုံးလျှပ်တပြက်ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဆရာဦးမြတ်ခိုင်က သုခရိပ်မြုံ HIV ကူးစက်ခံ မိဘမဲ့ ကလေးငယ် များဂေဟာအတွက် ငွေကျပ် သိန်း(၂၀) တိတိ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး သုခရိပ်မြုံနာယက ဆရာမ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်မှ အလှူငွေလက်ခံပေးခဲ့ပါသည်။
နောက်တော့ အလင်းတန်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဆရာဦးဝင်းငြိမ်းက မြောက်ဥက္ကလာ ဝေဘာဂီ အထူးကုဆေးရုံသို့ အလှူငွေကျပ် သိန်း(ဂ) တိတိ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး သုခရိပ်မြုံနာယက ဆေးရုံအုပ် ဆရာဝန်မကြီး၏ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးမှ အလှူငွေလက်ခံပေးခဲ့ပါသည်။
နောက်တော့ ကာတွန်းဆရာအော်ပီကျယ်က ဆည်းဆာရိပ်ဂီလာန ခိုးကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘွားရိပ်သာအတွက် အလှူငွေကျပ် သိန်း(၅) တိတိ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး တာဝန်ခံတစ်ဦးမှ အလှူငွေလက်ခံပေးခဲ့ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး AIDS ရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် အလှူငွေကျပ်(၈)သိန်းကို ကဗျာဆရာမောင်စိမ်းနီမှ လှူဒါန်းပေးပြီး ဆရာမ သန်းမြင့်အောင်မှပဲ ကိုယ်စား လက်ခံပေးခဲ့ပါသည်။
စုစုပေါင်း(၄၁)သိန်း လှူဒါန်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ပထမ အလှူခံရရှိငွေ ၄၁ သိန်း ၄ ရာ တိတိရရှိထားပြီး ကဗျာဆရာ ကိုသစ်ကောင်းအိမ်နဲ့ မကေခိုင်တို့မှ၎သောင်း၃ထောင်၊သူငယ်ချင်းကျော်ကိုကိုမင်းနှင့်နှင်းယုဝေတို့မှ ၅သောင်း စုစုပေါင်း ၄၁သိန်း၉သောင်း၃ထောင့်၎ရာတိတိ ရရှိခဲ့ပြီး၊ လက်ကျန်ငွေ ၉သောင်း၃ထောင့်၎ရာကို သူခရိပ်မြုံကလေးလေးများ စားစရိတ်နှစ်ရက်စာ အတွက် လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
ပွဲလေးကို အားလုံး၄၀ ကျော် ခန့် တက်ရောက်ပြီး အလင်းတန်းဂျယ်နယ်၊ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်၊ ပေါ်ပြူလာ ဂျာနယ်၊ ပေါ်ပြုလာ နယူးစ် ဂျာနယ်နဲ့ ဂျယ်နယ်တော်တော်များများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
နောက်ဆုံး ဆရာမောင်မျိုးက စေတနာသုံးတန်အကြောင်းနဲ့ အပိတ်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးပြီးအခမ်းအနားလေးကို အောင်အောင် မြင်မြင် ကြည်နူးပိတ်များဖြင့် အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
၄။ လေးလေးနက်နက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်နေရသူများ
ကျေးဇူးတင်စကားချရေးရတော့မည်ဆိုတော့ တိုတိုတုတ်တုတ် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါ သည် ပြောလိုက်ရင် ကောင်းမလားဟု စဉ်းစားလိုက်မိသည် ။ တကယ်လည်း ဒီပွဲလေးဖြစ် အောင်လုပ် အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာအတွက် ကျေးဇူး တင်ရမည့်သူတွေ သိပ်ကို များပြားလွန်း ပါလှပါသည်။
ပထမဆုံး အားတက်သရော ၀ိုင်းဝန်းလှူဒါန်းပေးကြသည့် နိုင်ငံအသီးအသီးမှ စေတနာရှင်ညီအကို မောင်နှမ တွေ..ကို ကျေးဇူး တင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။နောက် တစ်စိတ်တည်း တစ်ဝမ်းတည်း အလှူခံပေးကြတဲ့ ညီအစ်မတွေ ဖြစ်တဲ့ခင်လေးငယ် ၊ သင်းသင်း၊ မယ်ကိုး ၊ မိုးမမလွင်နှင့်တကွ ခရတွန် ၊ သျှင်ခ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဘုန်းဘုန်း အရှင်ကုဏ္ဍလ ၊ မိုးကုတ်သား ရီနိုမန် တို့ကို အထူး ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်..။ ခင်လေးငယ်ဆို သူ့ တူမတွေ ညီမတွေပါ မကျန် အလှူခံပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်..။ ဒါကြောင့် ညီမလေးတွေ တူမလေးတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။
အခု အလှူခံပေးကြတဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေကိုလည်း လေးလေးနက်နက် ပြောချင်တာလေး တစ်ခုရှိ နေပါသည်..။ ဒီအလှူပွဲလေးဟာ ခုဆို ဒုတိယအကြိမ်သို့တိုင်ခဲ့ပြီ၊ တကယ့်ကို လိုအပ်နေတဲ့ အစဉ်အလာ ကောင်းလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါပြီး တစ်စက်တစ်ပေါက်ကနေ ပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးခွင့်ရတဲ့ ဒါနပွဲလေးလည်း ဖြစ် ပါသည်.။ ဒါ ကြောင့် အိန္ဒြာ ဗမာပြည်ကို အပြီးတိုင်ပြန်သွားခဲ့ရင်လည်း ဒီဇင်ဘာ (၁)ရက်နေ့ရောက်တိုင်း ဒီအစဉ်အလာလေးကို ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းကြပြီး နှစ်စဉ်လှူဒါန်းနိုင်အောင် ခုလိုပဲ အားတက်သရာ ၀ိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ပေးကြပါ.ကူညီကြပါလို့ ဒီစာလေးကနေ လေးလေးစားစား ပြောချင်ပါသည်။
နောက်တော့ လုပ်ချင်တာတွေကို မညည်းမညူ အကြံပေး ဦးဆောင် လိုက်လုပ်ပေးရှာတဲ့ မမ မနော်ဟရီ၊ အစစ အရာရာ ကူညီပေးတဲ့ ဆရာမောင်မျိုး ၊ အလှူငွေတွေကို လက်ရောက်ပေးလှူပေးကြတဲ့ ဆရာဦးဝင်းငြိမ်း ၊ ဆရာ ဦးမြတ်ခိုင်၊ ဆရာ အော်ပီကျယ် ၊ ဆရာ မောင်စိမ်းနီနဲ့ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဆရာဆရာမများ စာနယ်ဇင်း ဆရာများ ၊ အလှူငွေ လက်ခံပေးကြသောဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင်နှင့် ဝေဘာဂီဆေးရုံ သုခရိပ်မြံတို့ကို ကိုယ်တိုင်သွား အလှူအကြောင်းလေးပြောပြ ဖိတ်စာတွေ ကမ်းပေးခဲ့သော ဦးလှိုင်ဦး အားလုံး ကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါ ကြောင်း ဒီစာလေးနှင့် အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်ထားအပ်ပါသည်။
ပွဲလေးကို ဒီလို စတင်ခဲ့တာပါ
ဆည်းဆာရိပ် သူခရိပ်မြုံ အဖွဲ့သူတွေနဲ့ ကဗျာဆရာမကြီး မအိ စာရေးဆရာမနှင်းဝေငြိမ်းနဲ့ မမ မနော်ဟရီနဲ့ အိန္ဒြာ
ဆရာအော်ပီကျယ်၊ ဆရာစောဝေ၊ ဆရာစိုးသော်တာ၊ ဆရာမ သန်းမြင့်အောင်တို့နှင့်
ဆရာဦးစိမ်းနီ၊ ဆရာကိုခါး(ကွမ်းခြံကုန်း)၊ ဦးလှိုင်ဦး ၊ ဆရာမောင်လင်းရိပ်
ဆရာမ မအိ၊ ဆရာမနှင်းဝေငြိမ်း ဆရာစောဝေ ၊ ဆရာဦးမြတ်ခိုင် ၊ ဆရာဦးဝင်းငြိမ်းနှင့် ဂျာနယ်များမှ တာဝန်ရှိ သူများ
၆။ အလှူငွေစာရင်းရှင်းတမ်းအတွက် နောက်ဆုံးရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းလေး
စင်ကာပူနိုင်ငံက စုစုပေါင်းအလှူငွေ စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ၃၂၀၇ဒေါ်လာ ၊ မလေးရှားနိုင်ငံမှ ၆၁၇ ဒေါ်လာ စုစုပေါင်း ၃၈၂၄ ဒေါ်လာရရှိပြီး
ငွေဈေးနှုန်း( ၆၅၅)နှင့် ၁၀ သိန်းကျပ်၊ ငွေဈေးနှုန်း(၆၇၆)ကျပ်နှင့် ၁၅၅၃၄၄၈ကျပ်
စုစုပေါင်း ၂၅သိန်း ၅သောင်း ၃ထောင့် ၄ရာ ကျပ် တိတိ၊
ဂျပန်နိုင်ငံမှ စုစုပေါင်း ၁၂သိန်း၇ထောင်ကျပ်တိတိ
စုစုပေါင်း သိန်း ၄၁သိန်းနဲ့ ၄ရာ ကျပ်တိတိ
နတ်လူသာဓုခေါ်နိုင်စေဖို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
(ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ မြန်မာပြည်ကို တိုက်ရိုက်လွှဲမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာငွေကျပ် စာရင်းအတိအကျကို ထပ်မံဖေါ်ပြပေးပါဦးမယ်။)
အဲဒီ့ပွဲလေးအတွက်သတင်းနဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၆)ရက်နေ့ညမှာ တင်ပြပေးသွားပါ့မယ်..။
စေတနာ မေတ္တာတွေ ကွန်ယက်တစ်ခုလို ချိတ်ဆက်ပေါင်းစည်းထားတဲ့ အလှူဒါနပွဲလေး ပထမအဆင့် အောင်မြင်ပြီးမြောက်သွားပြီးမို့
စိတ်ပင်ပမ်း လူပင်ပမ်းရှိနေပေမယ့် ကြည်နူးဝမ်းမြောက်နေမိပါတယ်.။
အထူးကျေးဇူးတင်စကားတွေ ပြောနေဖို့မလိုပေမယ့် ဂျပန်က ချစ်ညီမ ခင်လေးငယ်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
(သူ့ခမျာ အလှူခံပေးရယုံမက အလှူငွေတွေပါ စိုက်ပေးလိုက်ရတာပါ..)နောက် ချစ်သူငယ်ချင်းသင်းသင်းထွဋ် ၊
မလေးရှားက ကရေတွန်လေးနဲ့ ညီမ မိုးမမလွင် ၊
အိန္ဒိယကနေ လက်လှမ်းမှီသမျှ ကြိုးစားအလှူခံပေးရှာတဲ့ အရှင်ဘုရား အရှင်ကုဏ္ဍလ
နဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလှူခံလာရင်အသင့်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကိုရီးယားစာပေချစ်မြတ်နိုးသူများအဖွဲ့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စလုံးက မယ်ကိုးတို့ မိုးကုတ်သားတို့ ရီနိုမာန်တို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဲဒီ့ လူ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အားလုံးက စိတ်ပါလက်ပါ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကရုဏာရှေ့ထား လှူဒါန်းကြတဲ့ မိတ်ဆွေညီအကို မာင်နှမအားလုံးရဲ့ ဒါနကုသိုလ်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲသာဓုခေါ်ပါတယ်။
သွားရောက်လှူဒါန်းမယ့် သုခရိပ်မြုံနဲ့ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကိုယ်စားလည်း ကျေဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်.။
နောင်နှစ်လည်း ဒီလိုအလှူမျိုးလေးဖြစ်မြောက်ဖို့ကို တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။
အားလုံး..နောင်နှစ်တွေမှာလည်း ကုသိုလ်တွေ အတူတူယူ ရေစက်တွေ အတူတူချကြပါဦးစို့..။
၃၃) ဆရာမ မနော်ဟရီ နှင့် သားများ Zephyr ၊ ခေတ်နေS$၁၀၀
၃၄)Zephyr နှင့် ရည်မွန်S$၁၀၀
၅၂)ကိုသော် + မအိအိ S$၅၀
၅၃)ကိုတင့်လွင် နှင့် ဇနီး S$၂၀
၆၃)Tan Yuh Horng S$၁၀
၇၇) Ko Crab S$၅၀
၇၈)ဦးကောင်းမြတ်နွယ်+ ဒေါ်မေသက် သဇင်မဂ္ဂဇင်း S$၅၀
၇၉)ဒေါ်သန်းသန်းနု(သပြေနု ကုမ္ပဏီ) S$၅၀
၄။ ဖိုးခွားလေး(ခ)စောကောင်းသန့် 5000
၅။ အမည်မဖော်လိုသူ စေနာရှင် 5000
၇။ ကိုပြည့်စုံ+မတင်တင်မိုး သမီး ထက်နန္ဒာ။သား သုခပြည့်စုံ 2000
၉။ဦးမြသောင်း+ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့် မိသားစု ပဲခူး 5000
၁၀။ ဦးမျိုးမြင့်+ဒေါ်ဘေဘီနွဲ့ မိသားစု 10000
၁၁။ ကိုမျိုးမင်းမင်းအောင်+မမေသူအောင် 2000
၁၂။ သင်းသင်းထွဋ် 5000
၁၄။ မြမြမိုး 3000
၁၅။ ရဲထွဋ်စိုး 5000
၁၆။ ပန်းယုမွန် 2000
၁၇။ သွဲ့သွဲ့အောင် 3000
၂၁။ ဖြူ ဖြူကြွယ် 3000
၂၂။ ကိုဇော်ဇော်အောင် 3000
၂၃။ နိုင်ရဲသူ 2000
၂၄။ကိုဝင်းသိန်းထွဋ်+မတင်ဌေးလှိုင် သမီး မိုမိုချန် 2000
၂၅။ ဖြိုးဝေ 3000
၂၆။ ကိုဟန်မျိုး 5000
၂၇။"ကိုဝေလင်းအောင် " 3000
၂၈။ကိုလင်းအောင် မကြိုင်ကြိုင်လတ် သမီး သိရိနွယ် 3000
၂၉။ ကျော့ကျော့လွင် 1000
၃၁။ ဟန်စုလွင် 1000
၃၂။ လဲ့လဲ့ဖြူ 1000
၃၃။ ကျော်ဇေယျ မော်မော်ဝင်း 1000
၃၄ ကိုဌေး၊ မလွင်၊ ကိုကျော်လေး 3000
၂) မိုးမမလွင် မလေးရင်းဂစ် RM၁၀၀
၈)မောင်မောင် RM ၅၀
(ရွှေမန်းမေ အထည်ဆိုင်) RS ၅၀၀
၃)မဖြူဇင် - ( ရန်ကုန်)၁၀၀၀၀Kyats.
၄ )ဆရာတော် ဦးဇောတိဿရ- (ပုသိမ်)၁၀၀၀၀ Kyats
၅ )ဆရာတော် ဦးကုဏ္ဍလ- (ကျောင်းကုန်း) ၁၀၀၀၀ Kyats.
၇)ဆရာလေး မအိန္ဒြာကာမီ ရန်ကုန် RS 300
ဂ)ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍ၀ ရန်ကုန် Rs 500
၉)မမြင့်မြင့်ခိုင်( အမေရိကား) US$50
မြန်မာငွေကျပ် ၂ သိန်းတိတိ
ကိုသန်းတွေ မထားထားစိုး ၂၀၀၀၀ ကျပ်
စုစုပေါင်းမြန်မာငွေကျပ် ၄၁သိန်းနှင့် ၄ရာ ကျပ်တိတိဖြစ်ပါသည်။
( ဒီမှတ်တမ်းလေးကို E Book အဖြစ် ဖြန့်ဝေပေးဖို့ စီစဉ်ထားပြီး အလှူရင်များ အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းထားနိုင်စေဖို့ အွန်လိုင်းမှ ဖြန့်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..)
အစီအစဉ်စဆုံး ပို့ရှည်ကြီးကို တဝကြီးဖတ်၊ ဓါတ်ပုံတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းလိုက်ရသလို သေချာကြည့်မိပါတယ်။ ကလေးလေးတွေနောက်ကျောကို ကြည့်ပြီးတော့တောင် ပီတိလည်းဖြစ် စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိတယ်။ ဒီအလှူကြီးအတွက် စိတ်တူကိုယ်တူ လှူဒါန်းကြသူများအားလုံးအတွက် သာဓု၃ကြိမ်ခေါ်သွားပါတယ်၊ အားလုံးပဲ ဒီကုသိုလ်တွေနဲ့ထပ်တူ အကျိုးခံစားကြရပါစေ...။
သုခရိပ်မြုံမှသည် စာရင်းပိတ် အလှူငွေ